Kooxda Banaadir ayaa Galabta noqotay Horyaalka Kubadda Cagta Soomaaliya
Kooxda Kubadda Cagta Banaadir Telecom ayaa galabta si buuxda u noqotay Horyaalka Kubadda Cagta Waddanka Soomaaliya kadib markii kooxdii ku soo xigtay oo ahayd Naadiga Elman barbardhac la gashay Kooxda Dekedaha.
Kooxda Elman oo Cayaar ka tirsan Horyaalka 35-aad ee Kubadda Cagta dalka Soomaaliya galabta la yeelatay Kooxda kale ee Dekedaha ayaa waxay labada naadi isla dhaafi waayeen 1-1 waa Dekedaha iyo Elman, iyadoo Kooxda Elman ku dadaalaysay sidii ay guul uga gaari lahayd Kooxda Dekedaha.
Bilawgii Cayaarta ayaa Kooxda Elman waxaa Gool u dhaliyay Kabtankooda Gaduudow, hase ahaate markii daqiiqado yar ka harsanayd Cayaarta qeybteeda hore Kooxda Dekedaha waxay heshay Goolkii barbardhaca ahaa, kaas oo u dhaliyay Laacibka u sitay Nambarka 11-aad.
Qeybtii Labaad Cayaarta ayaa Labada kooxood waxay is dhaafsadeen Weerar iyo weerar celis balse fursado goolal badan loo maleynayay ayaa Kooxda Elman iska khasaarisay.
Kooxda Elman qeybtii dambe Cayaarta waxay ku cayaareysay 9 Cayaartoy kadib markii Garsoorihii Cayaarta dhexdhaxaadinayay ka saaray Garoonka Labo ka mid ah Cayaartoyda Kooxda Elman oo uu ka mid yahay Kabtankooda Gaduudow.
Barbardhac Labada kooxood galabta wada galeen ayaa Kooxda Banaadir waxay ku muteysatay inay tahay Horyaalka Kubadda Cagta Soomaaliya iyadoo weliba Cayaar u harsan tahay Banaadir.
Kooxda Banaadir waxay leedahay hadda 24 dhibco, Elman oo ku xigta ayaa waxay leedahay 22 dhibco, laakiin Kooxda Elman wax cayaar ah uma harsan, balse Banaadir beri ayaa waxay la cayaareysaa Kooxda Badbaado.
Taageeriyaasha Banaadir ayaa markii ay dhamaatay cayaarta dhex martay Elman iyo Dekedaha oo ka dhacday Garoonka Banaadir Koonis waxay bilaabeen in ay u dabaaldegaan guusha ay ka gaareen Horyaalka Kubadda Cagta Soomaaliya.